poetry – Page2– Kiran Kumar
March 16, 2020 March 16, 2020 Kiran Kumar
तिमी आयौ भने जिन्दगी फल्नेफुल्ने भन्ने पनि होइन हो, मनमा सन्तुष्टि थपिएला ।तर तिमी भ्रममा नरहनु । तिमी आइनौ भने उजाड पक्कै बन्ने छैन जिन्दगी केही समय के नभएको, के नपुगेको होला तर तिमी भ्रममा नरहनु । जिन्दगी कहाँ सकिन्छ, Read More …
poetrykirrkur, playingwithwords, poetry, thoughtsLeaveacomment
March 15, 2020 March 15, 2020 Kiran Kumar
खै थाहा छैन कुन सजिलो छ ?बाँच्न या मर्न ? बाँच्नेहरू त बाँच्न जति गाह्रो अरू केही छैन भन्छन् । रहर छ मनमा मर्नेहरूको पनि विचार बुझ्ने । चैत्र ०२, २०७६
March 9, 2020 March 9, 2020 Kiran Kumar
एकथान मुटु त मेरो पनि छ । सद्दे छ धड्किरहेछ । हो अलिकति जिद्दी छ,तिम्रो लागि धड्कने चाहा गर्छ ।जस्लाई म रोक्न पनि सक्दिन । हैन, हैन रोक्नै मन लाग्दैछ । आफ्नै त हो, आफ्नाहरूलाई किन रोक्नु ? आफ्नै मुटु, Read More …
poetryplayingwithwords, poetry, thoughts, words, जिन्दगी, मुटुLeaveacomment
March 2, 2020 March 2, 2020 Kiran Kumar
मलाई त्यो तिमी भएर गुज्रने याद देखी घृणा लाग्छ ।तिम्लाई घृणा गर्न सक्दिन नि त । घुम्दैघुम्दै अघि बढ्नेति गल्ली, जो तिम्रा कदम पछ्याउन बहुत कामको थियो, सँग पनि घृणा लाग्छ ।यो अझै पनि यहीँ छ तर तिमी साथमा छैनौ Read More …
poetrykirrkur, playingwithwords, poetry, thoughts, घृणाLeaveacomment
अलबिदा साथी !!
March 1, 2020 March 1, 2020 Kiran Kumar
साथी तँ त कायर रैछस् निहत्था आफ्नो ज्यान फालिस् सानैदेखि बहादुर हुँ भन्थिस् तर तेरो यो बहादुरी कायरहरूको हो । तैले जतिनै साहस मर्नलाई गरेको भएपनि दुनियाँले बहादुरी मान्दैन कायर नै भनेर सम्झन्छ ।हुन त तलाई यो दुनियाँ नै कायर Read More …
poetryalbida, kirrkur, playingwithwords, poetry, Saathi, thoughts, wordsLeaveacomment
September 1, 2019 September 4, 2019 Kiran Kumar
जान देउ ती सबैलाई जो जान चाहन्छन् । कसैको रहर, कसैको सपनालाई कैद गरेर तिमी हत्यारा नबन । तिमी तिम्रो स्वार्थ छोडिदेउ । तिमी तिम्रो रहर त्यागिदेउ । ति जिद्दी छन्, जिद्दी गरीरहेछन् जानलाई तिमी पनि जिद्दी भयौ भने तिनलाई Read More …